Mary McClements waxay safarkooda shaqo bilaabay 1990s iyadoo ka shaqeyneysa guri kooxeed loogu talagalay wiilasha, iyadoo ah fanaan, macalin farshaxan iyo milkiilaha iskuulka farshaxanka. Marxaladahaas dartiis Mary waxay ku baratay inay aad ugu raaxeysato la shaqeynta dhalinyarada la halgameysa dhibaatooyinka bulshada / shucuurta Tani aakhirkii waxay u horseedday shaqadeeda lataliyaha kala-guurka waxbarashada gaarka ah ee dugsiga sare ee dadweynaha ee VT ka dibna waxay u gudubtay shaqo la mid ah Kuliyada Bulshada ee Vermont. Maryan aakhirkii waxay soo caga dhigatay UVM halkaas oo ay ahayd Isuduwaha Shaqaalaynta Ardayda muddo 6 sano ah. Kadib markay ka caawisay sanooyin badan shaqooyinka iyo kala guurka nolosha, Mary waxay si rasmi ah uga dhigtay 2019 iyadoo dhameystirtay shaqadeedii koorsada ee ICF hadana waa tababare la xaqiijiyay oo ah tababaraha ku meel gaarka ah (waxay doorbideysaa: 'Evolution Engineer') iyadoo adeegsanaysa hamigeeda dhaqdhaqaaqa iyo farshaxanka muuqaalka leh macaamiisheeda. Mary's hold ee shahaadooyinka xirfadeed ee Gargaarka Degdegga ah ee Caafimaadka Maskaxda iyo Hoggaanka Maskaxda, waxay xubin ka ahayd Guddiga La-talinta Hawlaha HOPE iyo Kooxda Daraasaadka Caddaaladda ee Dib-u-Celinta ee gobolka VT iyagoo eegaya fursadaha RJ inay tahay ikhtiyaar loogu talagalay dhibbanayaasha rabshadaha galmada iyo qoyska, oo hadda waa hadda xubin ka tirsan guddiga RJ ee Burlington CJC. Mary sidoo kale waxaa lagu sharfay inay ahaato waqti dhiman Xiriiriyaha Dhibanaha ee Xarunta Cadaalada Bulshada ee Koonfurta Burlington waxayna hada xubin ka tahay gudiga RJ ee Burlington CJC. Waxay ku noolayd 3 dal, waxay leedahay 2 eey, iyo 2 dhalinyaro yaab leh
kuwaas oo si cad u maleynaya inay runtii fiican tahay.
Pablo Bose waa aqoonyahan socdaalka iyo cilmiga magaalooyinka. Wuxuu ku dhashay Hindiya kuna barbaaray Kanada, Dr. Bose wuxuu xiiseynayaa siyaabaha ay dadka iyo muuqaalku isku qaabeeyaan. Waxa uu haystaa shahaadada BA-da Ingriisiga iyo Taariikhda, MA-ga Isgaadhsiinta, iyo PHD-da ee Daraasaadka Deegaanka Wuxuu ku jiray UVM ilaa 2006 waaxda Juquraafiga illaa iyo 2015 wuxuu agaasime ka ahaa Barnaamijka Daraasaadka Caalamiga iyo Caalamiga. Dr. Bose sidoo kale waxay gudoomiye ka tahay guddiga manaahijta kala-duwanaanta UVM waxayna u adeegtaa sida Provost's Faculty Fellow for Diversity and Inclusion. Seddexdiisa mashruuc ee cilmi baarista ugu weyn ayaa hada ku saabsan dib u dejinta qaxootiga ee Waqooyiga Ameerika iyo Yurub, barakaca deegaanka ku yimid, iyo magaalooyinka koonfurta adduunka. Wuxuu had iyo jeer xiiseynayay barashada iyo cilmi baarista maadooyinka kala duwan; qaar ka mid ah koorsooyinka uu ka bixiyo UVM waxaa ka mid ah Jinsiyada iyo Jinsiyadaha Mareykanka, Socdaalka iyo Transnationalism, Juqraafiga Hindiya, Nabadda iyo Colaadda Belfast, Juqraafiga Isboortiga, iyo Nolosha Magaalada Caalamiga ah.
Wuxuu sidoo kale firfircoon ka yahay bulshada isagoo u soo noqday gudoomiye kuxigeenka maamulka taraafikada maxalliga ah, wakaaladda guryaha dadweynaha, iyo guddiyada brownfields. Wuxuu hadda iskaashi la leeyahay Ururka Midowga Afrika ee ku nool Vermont barnaamijyada ka hadlaya dhalinyarada iyo nidaamka caddaaladda dembiyada,
caafimaadka bulshada, iyo helitaanka cuntada.
Sparks hadda waa Maamulaha Sinnaanta iyo Iskuullada Loo Dhan Yahay ee Dugsiyada Degmadda Burlington (BSD). Doorkan, wuxuu hogaaminayaa dadaalka lagu hirgalinayo Dhaqanka Dib-u-Celinta Degmooyinka, iyo sidoo kale taageerida Qorshaha Sinnaanta ee BSD iyo yoolalka la xiriira. Sparks sidoo kale waxay mas'uul ka tahay hagida shaqada ee Shaqaalaha BSD ee Loogu talagalay, kuwaas oo mas'uul ka ah ka jawaab celinta dhacdooyinka xoogsheegashada, necebida, iyo dhibaataynta. Shaqadiisa, wuxuu diiradda saarayaa ugu horreyn taageerida dhammaan ardayda iyo qoysaska, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda luqadaha la takooro ama aan ku badnayn, jinsiyadda, dhaqan-dhaqaale, iyo qowmiyadaha. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ku taageeraa maamulayaasha dhismaha xallinta khilaafaadka
iyo arrimaha kale ee maamulka. Sparks waxay kaloo lashaqeysaa macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee BSD.
Wuxuu haystaa shahaadada Bachelor-ka ee cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Nevada, Las Vegas iyo shahaadada Master-ka
Horumarinta Bulshada iyo Dhaqaalaha ka
Jaamacadda Koonfurta New Hampshire.
Regina Mahony waa Maamulaha Barnaamijka Qorsheynta ee Guddiga Qorsheynta Gobolka ee Gobolka Chittenden (CCRPC) halkaas oo ay ka shaqeyneysay tan iyo sanadkii 2011. CCRPC, Regina waxay ka caawisaa Agaasimaha Fulinta maareynta iyo hirgelinta barnaamijka qorsheynta CCRPC oo ay ku jiraan tayada biyaha, qorsheynta tamarta, maareynta xaaladaha degdegga ah, guryaha iyo isticmaalka dhulka. Regina waxay u adeegsataa khibradeeda qorsheynta degmada inay ka caawiso degmooyinka xubnaha ka ah iyo la-hawlgalayaasha gobollada barnaamijyada guriyeynta, tababarka isticmaalka dhulka, qorsheynta dhammaystiran, qorista xeerarka, iyo dib u eegista horumarka. Regina waxay sidoo kale isku dubaridaa dadaallada Qorsheynta Gobollada ee ururka iyada oo loo marayo hirgelinta
iyo cusbooneysiinta Qorshaha ECOS.
Shaqada ka baxsan, Regina mutadawiciin ka ah Burlington Dismas House, Burlington Restorative Justice Panels,
waana Guddoomiyaha Guddiga Latalinta Bulshada ee
Xarunta Caddaaladda Bulshada ee Burlington.
Regina iyo ninkeeda waxay degan yihiin Burlington halkaas oo ay si guul leh ugu gudbeen guri hal gaari ah, oo si farxad leh ugu isticmaala kaydka kharashka safarka. Regina waxay ku faantaa inay ku dhameysatay Wadada Dheer ee 2018.
Abijah Francis Manga waa musharax doctorate ka ah Jaamacadda Vermont. Wuxuu ku sameynayaa shahaadada Doctorate ee waxbarashada waaxda hogaaminta iyo daraasaadka siyaasada. Francis wuxuu leeyahay meherad yar oo la yiraahdo Loving Home Care ( www.lovinghomecare.net ) oo daryeela dadka waayeelka ah iyo dadka soo gala. Wuxuu hadda yahay Tababaraha MHFA wuxuuna u shaqeeyey AALV (Ururka Afrikaanka ee ku nool Vermont) Isuduwaha Barnaamijka Dhalinyarada. Kahor inta uusan ku biirin AALV, wuxuu ka shaqeeyay CVOEO isagoo ah Khabiir ku takhasusay Isuduwaha Mashruuca Guryeynta iyo Isuduwidda. Intaas ka hor, wuxuu ka soo shaqeeyay xafiiska Raiisel Wasaaraha Congo isagoo khabiir ku ah Arimaha Dibadda. Waxaa intaa dheer, isagu waa a
macallin jacayl leh oo wax lagu baray dugsi sare
in ka badan shan sano.
Francis wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee Maareynta Dadweynaha iyo Siyaasadda Horumarinta Koonfurta Kuuriya wuxuuna haystaa shahaadada labaad ee mastarka ee Waxbarashada oo uu ku qaatay TESOL.
Wuxuu aaminsan yahay in la isku daro qiyamka casriga ah
oo leh caqiido dhaqameed.
M arlon Fisher wuxuu noloshiisa ku qaatay inuu ka shaqeeyo goobo aan tiro lahayn oo caruur iyo dhalinyaro ah, isagoo ka caawiyay inay naftooda u abuuraan nolol amaan iyo caafimaad leh. Wuxuu had iyo jeer si gaar ah u soo jiitay inuu la shaqeeyo dhalinyarada asalka adag leh, ama laga yaabo inay ka quusteen dadka waaweyn ama hay'adaha noloshooda.
Ilmo ahaan, Marlon wuxuu ku koray dhammaan shanta degmo ee magaalada New York. Wuxuu kaqeyb galay kaamkii xagaaga ee Adirondacks, halkaas oo uu ku bartay xirfadaha hogaaminta iyo latalinta. Markuu qaangaadhay, wuu iska joogay; iyada oo loo marayo shaqo adag iyo dadaal, Marlon wuxuu aakhirkii fuulay safka si uu u noqdo madaxii ugu horreeyay ee qaybta madaw ee xerada.
Ka dib isku dayo badan oo ku saabsan waxbarashadda heerka koowaad ma shaqeyn, Marlon wuxuu iska qoray Ciidanka Mareykanka isagoo ah All Source Sirdoonka Falanqeeye, halkaas oo uu mar kale ka helay saaxiibtinnimo iyo koox kooxeed uu aad u jecel yahay. Wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo qaniinyada majaajillada ah ee asxaabtiisa Ciidanka, wuxuuna si dhakhso leh u bilaabay jilista majaajillada, xiisaha uu wali daba joogo maanta.
Ka dib shaqadiisii ​​Ciidanka, Marlon wuxuu bilaabay xirfad dheer oo abaalmarin leh oo uu ku daryeelayo dhalinyarada goobo kala duwan: cidlada, deganaanshaha, iyo bulshada. Hadda wuxuu u shaqeeyaha Adeegga Qoyska ee Waaxda Carruurta iyo Qoysaska.
Intii uu guriga la joogay wiilkiisii ​​curadka ahaa, Marlon wuxuu dhammeeyey shahaadada Bachelor-ka ee uu ka qaatay Kulliyadda Champlain sanadkii 2017. Marlon hadda wuxuu leeyahay laba wiil, mas'uuliyadda ugu weyn iyo farxadduna waa waalidintooda; wuxuu u rajeeyay iyaga inay u koraan rag madaxbanaan xoog iyo daacadnimo. Damaca kale ee Marlon waxaa ka mid ah u doodista isbeddelka siyaasadeed, cunto karinta, kaxeynta baaskiilka, iyo kaamaynta.
Si aad u aragto ajandayaasha iyo dukumiintiyada taageeraya shirarka Guddiga Latalinta Bulshada, guji halkan